Umhla My Pet » Indlela Umhla Umntu Evela Dog Park
Indlela Umhla Umntu Evela Dog Park
Masithi, wena eliphosa Frisbee nomhlobo wakho buboya epakini inja zengingqi kwaye uqaphela iqabane lakho umphefumlo olunokubakho umgama. Wenzani ngoku? Ukususela kwintshayelelo kuqala ngokulitywina sinye kuyo ngomhla, siye bazenzile ezinye iingcebiso ngendlela ukuthandana nomntu ukusuka park dog.
incam #1: Fundisa Dog wakho Trick ezintle
Nangona ukuba kukhuselekile ukuthi wonke lweepaka inja uthanda izinja, kukho into Ongofanelwe ngokuba inja ukuba uyayazi into iqhinga eyoyikekayo-bafanelwe. Xa usebenzisa umyalelo angabonwa, unako ukufundisa inja yakho liqhinga edlulisa kuphela ubuntu bakho, kodwa uza nomtsalane kwabanye.
incam #2: Makhe Dog lwakho Dlala kunye Okunye Dogs
Ebonisa ukuba inja yakho kuphela uthanda nezinye izinja kodwa Uyakuthanda ukudlala nabo ekwenza angeneke kakhulu ngakumbi. Plus ukuba uyenze uvana off, izinja zakho nekhono ukuphila phantsi kophahla olunye kwaye kungekho mntu ufuna ukuba kuziswe inja ongenayo ndiphilisane ngoxolo nabanye. Isitshixo ukufumana izinja bakho abahlobo kuqala.
incam #3: Qala Incoko casual
Nokuba oko usuku intle okanye kukuba bobabini lwezinja zakho zidlala omnye nomnye, ndiqalise incoko nje. Ku ngexesha le ncoko, uya kufumana ukufunda okungakumbi ngalo mntu. Qala olucothayo ubone apho kukhokelela.
incam #4: INumeri Exchange mfono ukuba Doggy Umhla
Emva kokuba wathetha ambalwa ngamaxesha ahlukeneyo, abuze xa badla beze epakini inja. Cebisa ukuba unokuyitshintsha amanani ukuba nokulungelelanisa umhla senja. akayi kuba ngabaya Lo mhla lokuqala njengoko ingqalelo ngeenxa lwezinja zakho.
incam #5: Ukudlulisa Umhla Isimemo – Sans Dogs
Emva kokuba uyazi ukuba unomdla, ubacele phandle ngomhla isidlo. Ukuhlanganisana senithandana isicwangciso sans izinja kuya kukhokelela kwincoko nokuba nzulu kwaye ngethemba eya kukhokelela kwinto eninzi.
Ezi ngcebiso, ngoku uyazi kakuhle into ukwenza kwixesha elizayo ubona ukuba Dance epakini inja.
Yintoni Wonke umntu Kuphephe phezu Umhla First
Kutheni Ufanele Zama Ukuthandana Umntu Ngubani na Type wakho